I-45 YEENDAWO ZENWELE EZIKHANYAYO ZENDODA (ISIKHOKELO SE-2021) - IINWELE ZAMADODA
I-45 ye-Spiky Hairstyle yaMadoda
Eyona Iinwele Zamadoda I-45 ye-Spiky Hairstyle yaMadoda
Izinwele ze-Spiky zenza ukubuya okukhulu njengenye yeenwele ezithandwa kakhulu ngamadoda. Ngelixa iinwele ezicocekileyo bezisoloko zihamba iminyaka, iinwele zangoku ezinamabala zongeza ezininzi…
Izinwele ze-Spiky zenza ukubuya okukhulu njengenye yeenwele ezithandwa kakhulu ngamadoda. Ngelixa iinwele ezicocekileyo bezisoloko zihamba-hamba iminyaka, iinwele zanamhlanje ezinqunqiweyo zongeze ukusikwa kunye nezitayile ezininzi. Umzekelo, iinwele ezimfutshane ze-spiky zikhangeleka zicocekile kwaye zibunjiwe ngaphezulu nge ukuphela kwetaper okanye ngaphantsi emacaleni. Ngapha koko, i-spiky fade kunye ne-undercut zezona zilungiso ze-spiky zilungele amadoda ukuba azikhethe kuba zombini isitayile sineenwele ezimfutshane, eziphakathi kunye nezinde.
Kwangokunjalo, ubude obuphakathi kunye neenwele ezinde ezinde ezibonakala zintle ngobume bobuso obufanelekileyo kunye nezitayile zokucheba iinwele. Amakhwenkwe anokuthatha isigqibo phakathi kweenwele ezitsikiweyo ngaphambili, i-spikes ezingqindilili kuyo yonke indawo, okanye ukudibanisa iinwele zakho ezinesipiksi kunye nomphetho omde, ikama ngaphezulu, i-quiff, okanye ifeksi. Kwaye ngenxa yokuba iinwele ezitsikiweyo zamadoda ziguquka kakhulu, abafana bayakwazi ukwenza isitayile senani iinwele ezipholileyo xa befuna ukutshintsha inkangeleko yabo.
Ngeendlela ezahlukeneyo zesitayile, kunokuba nzima ukukhetha ezona zinwele ze-spiky zamadoda zifanelekileyo. Ukusuka kwizinwele zanamhlanje ezinesiqu esineenwele ezingqindilili, ezibunjiweyo ukuya kwizitayile ezimdaka ezinamacala amafutshane, nazi ezona zinwele zihombisayo ezinamadoda anokuzama ngoku.
1Iinwele ezimfutshane zeSpiky
MbiniI-Messy Spiky Izinwele
3Izinwele ezi-Spiky ziya kuphela
5Izinwele ezinde zeSpiky
6Iinwele ezitshiziweyo ngaphambili
8Izinwele ezenziwe ngeSpiky
10Izinwele ezi-Blonde Spiky
Shumi elinanyeIinwele zeTipered Spiky
12Iinwele zeAsia Spiky
13Iinwele eziWavy Spiky
14Icala leSpy Hairstyle
Shumi elinantlanuAmakhwenkwe Spiky Izinwele
16Ungayichitha njani iNwele
17Ezona Mveliso ziNwele ziPhambili kwiNwele eziSpiky
18Izitayile zeSpiky ezipholileyo zaMadoda
Iinwele ezimfutshane zeSpiky
Iinwele ezimfutshane ze-spiky zezona zininzi iinwele ezithandwayo kuba iinwele ezimfutshane kulula ukuzenza, kulula ukuzigcina, kwaye zinokujongeka zilungile ngemveliso encinci yeenwele. Iinwele ezimfutshane ezinamabala aziphelelwa lixesha, kwaye abafana banokuhlala bekroba abasebenzi, isityalo saseFrance, okanye icala, ukubiza nje ezimbalwa.
izindlu ngeenkwenkwezi intsingiselo
Isiseko seenwele ezimfutshane ezinesipikha siqala ngamacala amafutshane, afana nokuphakama impandla iyaphela okanye unqanyulwe ngaphantsi . Ukucheba iinwele okufutshane emacaleni kuya kubonelela ngokungafaniyo okuyimfuneko ukuze kugxilwe amehlo kwinto ephezulu ethe tyaba. Ezantsi ukuphela kwetaper ngee-spikes ezimfutshane nako kungakhangeleka kucocekile kwinkangeleko yeshishini.
Ukwenza isitayile senwele ezimfutshane, sebenzisa i pomade eyomeleleyo , umthwebeba okanye cream . Ngombala ocacileyo, wendalo, faka imveliso yeenwele ze-matte. Abafana banokutsala iipikethi ezimbalwa ezilungisiweyo ngaphezulu, zigcine iinwele zabo zijungiswe ngaphambili, bafumane inwele ezipheleleyo, okanye bayishiye kumdaka .
Ekugqibeleni, iinwele ezimfutshane ze-spiky zezinwele zipholile, azinangxaki, kwaye zi-edgy. Njengenye yezona zilungileyo iinwele ezimfutshane zabafana , Uya kuzithanda ezi ndlela zodolo.
I-Messy Spiky Izinwele
Iinwele ezithunyelweyo ezithandwayo ziye zathandwa kakhulu kwiindawo zokucheba iinwele kwihlabathi liphela. Ukuthungwa kweenwele ze-spiky kubonwa njengokungaqhelekanga, kumnandi kwaye kunomdla, kwaye abafana banokwenza isitayile ngokulula ekhaya ngeemveliso ezintle zeenwele kunye neenwele ezimfutshane.
Okokuqala, kuya kufuneka uthathe isigqibo sokuba uyafuna na iipiksiksi ezityebileyo ezichaziweyo okanye iinwele ezingcolileyo ezihamba macala onke. Le yokugqibela inokuba lukhetho olukhulu kumadoda aneenwele ezincinci ezifuna ukwenziwa gubungela umda weenwele ezihlayo okanye amabala anempandla. Endaweni yejagged, iingcebiso ezichazayo, zama ukujonga okuxekethile njengoko uphakamisa iinwele zakho.
Izinwele ezi-Spiky ziya kuphela
Iinwele ezi-spiky ziyaphela zezona zithandwa kwaye ziguquguqukayo kuzo zonke iinwele ezithandwayo. Kunye fade emacaleni , isitayile sangoku esine-spiky ngaphezulu siba yeyona nto iphambili ekujongeni.
Abafana banokukhetha phakathi kweentlobo ezahlukeneyo zokucheba iinwele. Ukuqala nge-low, mid or high fade, amadoda anokukhetha apho ukudibanisa kuqala khona. Unokucela umchebi wakho ukuba anqumle ulusu ukuze alfade i-bald fade okanye nje i-taper fade enenwele ezishiyekileyo.
Njengolunye lweenwele zamadoda eziphezulu, ispiky fade isebenza ngenani leemilo zobuso, ubude beenwele, kunye neentlobo. Ngapha koko, abafana banokuhlala beguqula iinwele zabo ezinamabala zibe yikama ngaphezulu kokuphela, okufutshane kubuyiswe umva, okanye faux hawk iphela ye iinwele ezintsha .
Inwele ecekethekileyo engaphantsi kolunye ulusu olupholileyo lwamadoda. Kunye amacala amafutshane kunye neenwele ezinde ngaphezulu , i-spiky undercut iyafana nokuphela. Umahluko kukuba i-undercut iqala phezulu kakhulu emacaleni kwaye ichetyiwe bonke ubude obude (ngaphandle kokuba yi ukuphela kwendlela ).
I-Bold kunye ne-edgy, iinwele ezingaphantsi zilungele amakhwenkwe, ulutsha, abafana beekholeji kunye nabafana abancinci. I-undercut emacaleni enenwele ezimfutshane ukuya kubude obuphakathi inika abafana amandla okwenza isitayile esimdaka ngaphezulu kwe-undercut, a ubuyele umva engaphantsi , yeka, mfondini , ebhaliweyo abasebenzi abasikiweyo , okanye umphetho omfutshane.
Ngokufanayo, unokukroba iinwele zakho ziye embindini, ngqo phezulu, okanye macala onke. Yongeza iindevu zokugqiba kwamadoda.
ndingalufumana njani uphawu lwam lwelanga
Izinwele ezinde zeSpiky
Iinwele ezinde ezibukekayo zinokuba mhle kwaye zijongeka kakuhle ukuba uyayazi indlela yokuthayipha iipiki zakho kakuhle. Ngefade okanye i-undercut emacaleni nasemva, iinwele ezinde ze-spiky zihamba ngoku.
Nokuba ufuna ukukroba iinwele zakho ngokuthe ngqo, ecaleni okanye ngasemva, uya kufuna ukusebenzisa imveliso ephezulu yeenwele, zeematte. Sincoma ukujongwa okulungisiweyo, okungcolileyo kweenwele ezinde, ngakumbi ukuba ufuna iinwele zi spiked ngaphambili.
Iinwele ezitshiziweyo ngaphambili
Zininzi iindlela zokuthambisa iinwele zakho ngaphambili. Ngelixa iinwele ezazijikijelwe ngaphambili yayiziinwele zeklasikhi ezingama-90, izitayile zangoku zixubana kwaye zadibanisa inkangeleko eyahlukileyo kwaye umkhwa ubuyile kakhulu.
Umzekelo, abafana banokuphakamisa iinwele zabo ngaphambili ngesikhwama, ikama ngaphezulu okanye abasebenzi basike ngasemva. Ngapha koko, nokuba ufuna iinwele ezinde okanye ezimfutshane ezitshelwe ngaphambili, iinwele ezicocekileyo zilungile ekwenzeni ivolumu yemvukelo kunye nentshukumo.
Ukucoca iinwele zakho ngaphambili, uya kufuna ukufaka isicelo se indawo ephezulu yokubamba , i-wax okanye ukhilimu. Qalisa imveliso ngeenwele zakho, ukusuka kwingcambu ukuya kwincam, kwaye usebenzise iminwe ukuqala ukukroba ii-bangs zakho. Gwema ukusebenzisa ibrashi okanye ikama kwaye uqiniseke ukuba ushiya iinwele zakho zibunjiwe, zendalo kunye ne-tousled.
Ukuthambisa iinwele zakho ngaphambili yindawo eshushu, elula kwaye elula, kwaye inokubonakala intle kubafana abaneenwele ezimfutshane, eziphakathi nezide.
Izinwele ezishinyeneyo zigcinwa zifutshane ngenxa yobunzima obukhulu be iinwele ezishinyeneyo . Ukucheba kweenwele ezimfutshane ezinwele ezingqindilili ziqala ngamacala amafutshane kakhulu ukukhawulezisa ii-spikes. Ukuphela okanye i-undercut ebhangqwe ngombala ogcobileyo ngaphezulu unganciphisa ukhiye wakho ngokwaneleyo ukuba unyikime ukujonga.
Khawukhumbule nje ukuba ixesha elide iinwele zakho ezinzima ziba nzima, kuya kuba nzima ukukhupha kunye nokugcina i-hairstyle yakho kwindawo yonke imihla. Ukunyusa iinwele ezishinyeneyo, kuya kufuneka usebenzise isixa esifanelekileyo sepomade elungileyo okanye imveliso yeenwele. Qala ngeenwele ezimanzi kancinci, isitayile sakho osithandayo se-spiky, kwaye usomise endaweni yaso.
Izinwele ezenziwe ngeSpiky
Izinwele ezenziwe nge-spiky ze-textured ziyakhula ekuthandeni, kwaye iindaba ezimnandi zezokuba kukho isitayile somntu wonke ngaphandle kobude beenwele, uburhabaxa, okanye ukutyeba. Umahluko kuphela phakathi kwezi zitayile zenziwe ngombala kunye noogxa bazo bakudala kukusetyenziswa kwe-matte pomade, udongwe, okanye ukhilimu (kuxhomekeke kuhlobo lweenwele zakho kunye neemfuno).
Ukuphela okuphezulu ngombala we-spiky ogqityiweyo yenye yezona ndlela zibalaseleyo, njengoko kunjalo nabasebenzi beklasikhi abanqunqwe nge-spikes ethe tye. Unako kwakhona ukuhamba ngombala otyhidiweyo otyunjiweyo ukuba unenwele ezinde. Kwinwele yeshishini, dibanisa iinwele ezenziwe ngombala kunye ukuphela okuphantsi .
Ithambile, igudile kwaye inomdla, wonke umntu kufuneka azame iinwele ezenziwe ngombala kulo nyaka!
Umphetho ongcolileyo ulungisa iinwele ezipholileyo kumadoda kufanelekile ukuzama. Isitayile sibonakala ngombengo omde ngaphambili kunye neenwele ezi-spiky kuyo yonke enye indawo.
Inkangeleko etyheliweyo kunye neyasendle ilungile emadodeni afuna ibhedi yeenwele kunye ne-bangs kunye ne-spikes.
Izinwele ezi-Blonde Spiky
Izinwele ezibukekayo ezibukekayo zibukeka zilungile kwizinwele ezimnyama okanye ezimdaka ngokwendalo, kwaye zinokubonelela ngokungafaniyo okuya kwenza ukuba iinwele zakho zibonakale. Ngelixa iinwele ezicocekileyo ezinamagqabantshintshi e-blonde zinokubonakala zi-90's, asithethi ngeengcebiso ezinqabileyo.
amadoda acheba iinwele ezinde
Endaweni yoko, zama imibala yeenwele zamadoda ezahlukileyo. Iinwele ezimhlophe zamadoda Unokuba nomtsalane xa usenza ngokufanelekileyo, ke cinga ngemigca ye-blonde okanye ngokufa kweenwele zakho ngokupheleleyo, blonde, mhlophe, okanye ngwevu.
Zama ukujonga nge-taper haircut emacaleni ukuze ugqibe ukusika ococekileyo. Ngaphandle koko, hamba i-badass ye-fuckboy yeenwele ezinesikhumba esikhulayo, amacala achetyiweyo, okanye i-undercut kunye nexesha elide, iinwele ezishinyeneyo ngaphezulu. Iinwele ezimhlophe ezinesitayile ngokuqinisekileyo ziya kukuqaphela kunye nabafazi ebomini bakho.
Iinwele zeTipered Spiky
I-taper ye-spiky hair taper ifana nokwahluka okuphelileyo, kodwa iinwele ezingaphathwayo emacaleni zikulondoloze ngakumbi kwaye zodidi. I-spiky taper fade idibanisa iinwele ezimfutshane kakhulu, kodwa iyakuphepha ukuveza ulusu. Unokucela i-barber yakho ukuba inqunyulwe i-tapered yamacandelo amade okanye iphantsi, iphakathi, okanye i-taper fade ephezulu.
Ukuba ufuna ukupholisa iinwele kubaqeqeshi bamashishini, i-tapered spiky hairstyle ingaba yindlela enhle yokwenza isitayela seenwele zakho ngaphandle kokuba nobudlova.
Iinwele zeAsia Spiky
Iinwele ezicocekileyo zaseasia zinokuhluka kakhulu kwaye zinokuhonjiswa. Ukuqala, Amadoda aseAsia baziwa ngeenwele zabo ezithe nkqo, ezingqindilili, kwaye nangona kunokuba nzima ukuthambisa kunye nesitayile ngaphandle kwemveliso yeenwele ezomeleleyo, iinwele zaseAsia zihlala zipholile, zibukhali kwaye zintsha. Fumana iinwele ezimfutshane ze-spiky okanye i-quiff esikwe ngokufanelekileyo kunye nesitayile.
Iinwele eziWavy Spiky
Abafana abane-wavy okanye iinwele ezinekhelizi ndisenako ukufumana iinwele ezi-spiky. Ngelixa wavy iinwele ezinamabala kunokuba lula ukufikelela kuzo ngeemveliso ezinokubamba kakuhle, iinwele ezigotyiweyo ziya kuba nokugqitywa okungaphezulu kokuchaseneyo nenwele ebukhali. Ubuncinane iisentimitha zobude ubuncinci, umphumo wokugqibela ngeenwele ezi-wavy okanye ezirhangqiweyo isitayile esipholileyo esinombala owahlukileyo.
Icala leSpy Hairstyle
Ikhonkco le-spike esecaleni ngokuqinisekileyo lutshintsho olwesabekayo lwala maxesha lweklasikhi ekhangelekile. Icala leenwele ezotyiweyo ngumxube wekama ngaphezulu kweespiksi ezinje ngeenwele. Ilungele iinwele ezimfutshane ukuya kubude obuphakathi, inxenye enzima inokongezwa kwicandelo leenwele elisecaleni lokuhombisa.
Amakhwenkwe Spiky Izinwele
Izinwele ezicocekileyo zamakhwenkwe ziyindlela entsha njengoko amakhwenkwe amancinci esiba nobuchule ngakumbi kunye nefashoni kunye neenwele zawo. Endaweni yesikolo esineenwele zesikolo njengenxalenye esecaleni okanye isitya esinqunyiweyo, iinwele ezinamakhwenkwe ezinqabileyo zinokubekwa kumgangatho wokuguquguquka kukhetho lwesitayile.
Ukusuka kubude obuphakathi obuphakathi ukuya kwinkwenkwana ethandekayo eneenwele ezi-spiky ukuya kwikama ngaphezulu ngeespikes, abazali nabantwana bazama iinwele ezipholileyo zamakhwenkwe .
Ungayichitha njani iNwele
Ngoku ukuba unethuba lokufunda ngakumbi malunga neenwele ezithandwayo zamadoda, unokuba nomdla wokuba ungazitshiza njani iinwele zakho kwaye uphinde wenze oku kujongeka ekhaya.
Ukuba ujonga iingcebiso malunga nendlela yokufumana iinwele ezi-spiky, esi sifundo sinyathelo-nge-nyathelo siza kukunceda ukuba ubeke isitayile sezona ndlela zilungileyo zokuhombisa zeenwele zamadoda.
Qala ngeenwele ezicocekileyo. Shampoo kunye nemeko yeenwele zakho kunye neemveliso ezikumgangatho ophezulu eziyilelwe uhlobo oluthile lweenwele. Izinwele ezicocekileyo zilula ngakumbi kunesitayile kuneenwele ezinamafutha.
Itawuli-Yomisa ngeNwele eziMdaka. Phantse yonke imveliso yeenwele- ipomade, i-wax, udongwe, i-gel kunye nekhrim- iya kukubonelela ngokubamba ngcono xa isetyenziswa kwizinwele ezimanzi kancinci ngokuchasene neenwele ezomileyo. Itawuli-yoma iinwele zakho de zibe mfuma nje.
Susa iiTangles namaqhina. Ukuba iinwele zakho zingaphezulu kweesentimitha ezimbalwa ubude, eli nyathelo libaluleke kakhulu. Sebenzisa ikama enamazinyo abanzi ukuze unciphise iinwele zakho kwaye uzilungiselele inkqubo yokwenza isitayile. Ukwenza oku kuyanceda ukugcina i-frizz ithambile kwaye ilawulwe, enokuthi ngokuqhubekayo yenze lula inkqubo yokuthambisa iinwele zakho.
Sebenza isixa esincinci seMveliso ezandleni zakho. Sebenzisa imveliso encinci yesitayile yeenwele ezimfutshane kunye nezinwele ezinde kodwa khumbula kungcono ukuqala ngesixa esincinci kakhulu - ubungakanani be-dime- kwaye ungeze ngaphezulu njengoko kufuneka. Xa kuziwa kwimveliso yeenwele, unokuhlala ufaka isicelo esingaphezulu, kodwa kuya kufuneka uqale ngaphezulu ukuba uninzi kakhulu. I-Wax, i-pomades, kunye nodongwe kufuneka kusetyenzwe phakathi kwezandla zakho ukuzifudumeza kwaye zenze ezi mveliso zithambekele ngakumbi; uninzi lweegel kunye neekhrim azifuni oku.
Faka isicelo seMveliso yokuLungiswa kweNwele kwizinwele zeSpike. Emva koko, sebenzisa imveliso yeenwele zakho ngenxalenye yeenwele zakho ofuna ukuziphepha, uvumela amacandelo ezinwele ukuba avele kwiminwe yakho njengoko ubaphatha kwaye ubatsalela phezulu. Kuya kufuneka ubone ii-spikes ziqala ukubakho kwezi ndawo, kwaye ukuba awunayo - okanye ukuba uneenwele ezingqindilili- ungadinga ukufaka kancinci imveliso.
Iinwele ezihombisayo zeSpy. Okokugqibela, sebenzisa izandla zakho, ikama, okanye ibrashi ukumisa iinwele zakho kwizinwele ozifunayo. Ukuba uya kwisitayile esicocekileyo esicocekileyo ngaphambili, sebenzisa ikama yakho ukuthambisa iinwele ngobumnene kwicala kunye nemilo oyifunayo. Ngakolunye uhlangothi, ukuba uya kwi-quiff okanye i-fohawk fade enesibindi, kuya kufuneka uqhubeke nokufaka imveliso kwaye usebenze izandla zakho phezu kwesipikha ngasinye amaxesha amaninzi de ihlale endaweni.
Sebenzisa uLuhlu lokuKhanya lwe-Hairspray. Ukuba uneenwele ezingqindilili okanye ezinde, kungafuneka ufake umaleko we-hairspray ukugcina i-hairstyle ye-spiky ijongeka intle imini yonke.
Ezona Mveliso ziNwele ziPhambili kwiNwele eziSpiky
Ezona mveliso zeenwele zintle kakhulu zixhomekeka kuhlobo lweenwele zakho kunye neenwele ozifunayo. Ngelixa eyona mveliso intle yokuphotha iinwele isetyenziselwa ukuba yijel yeenwele, ezona zinwele zamadoda zidumileyo namhlanje ngokubanzi zifuna i-wax okanye ipomade. Nangona kunjalo, imveliso ekulungeleyo ixhomekeke ekubeni ujikeleza ngokufutshane, ubude, bungqingqwa, ulungile, uthe tye okanye iinwele ezi-wavy.
Ukuba ufuna eyona pomade, udongwe, i-wax, i-cream okanye i-gel yeenwele ze-spikes, nantsi into ekufuneka uyazi ngumahluko phakathi kwesitayile seemveliso zamadoda.
Ukuthambisa iinwele ezimfutshane, unokufumana ukukhanya okungaphantsi, ukubamba okuqinileyo okanye ukubamba okuphezulu, ukukhanya okuphakathi ngokukhazimla ngokuxhomekeke kwinkangeleko oyifunayo. Ezi mveliso kunokuba nzima ukuba zisebenze ngokude, iinwele ezishinyeneyo kodwa zilungele iinwele ezimfutshane ze-spiky ke qiniseka ukuba uyigcine engqondweni. Sincoma iimveliso ezinje Suavecito , I-TIGI yeBhedi yentloko , I-Gatsby yokuhambisa i-Wax yerabha , kunye UBaxter waseCalifornia .
Udongwe lweenwele kunye ne-wax zilungele amadoda aneenwele ezincinci okanye ezintle njengoko ezi ntlobo zeemveliso zongeza ivolumu kunye nesitayile samandla ngaxeshanye. Umzekelo, uninzi lwee-wax zeenwele zamakhwenkwe zinee-bex, ezisebenza ukukhulisa iinwele kwaye zinike ukujonga okugcweleyo. Udongwe lulungile ukongeza ubume bendalo, ekwanika amadoda iinwele ezomeleleyo. Zama Udongwe oluSmooth Viking's Styling Clay kwaye Isamente yodongwe lweLayrite .
Ikhrimu yeenwele ezotyiweyo yeyona mveliso yeenwele eguquguqukayo. Iikhrimu zeenwele zamadoda zingena ngokulinganisela ekukhanyeni kwaye ziba bukhrim ngakumbi kunezixineneyo, zibenza bagqibelele ukwenza isitayile seenwele ezinde. Iikhrimu ezirinjiweyo ziya kwandisa ivolumu, ukuhamba kunye nokuhamba kweenwele ezithandekayo. Sebenzisa Layrite yendalo Matte Cream , I-Smooth Viking's Yila Cream , okanye I-Crew yaseMelika yokuCoca iinwele .
Okokugqibela, isitayile sejeli yenye indlela ekufuneka uyiqwalasele kuphela ukuba ujonge ukubamba okuphezulu, ukukhanya okuphezulu, isitayile esiqinileyo. I-gel yeenwele iyathandwa phakathi kwamadoda agungqisa i-mohawks, afuna iinwele ezi-spiky kakhulu, okanye abo bakhetha iinwele ezikhazimlayo ze-spiky zamadoda. Umzekelo, i-gel iya kukunika i-90's spiky haircut, kwaye inokuba ilunge ngakumbi ukuba uneengcebiso ze-blonde ezinqabileyo okanye amanqaku aphezulu kwizinwele zakho. Siyacebisa I-Gel yaseMelika yaseCyling kwaye Uhlobo lweGel eXakekileyo yeenwele .
ukucheba iinwele ezinde zamadoda
Izitayile zeSpiky ezipholileyo zaMadoda
Ngeenwele ezininzi ezipholileyo ze-spiky zamadoda, kunokuba yinto enobuqili ukukhetha eyona ndlela yokucheba iinwele zamadoda. Siyakukhuthaza ukuba uzame ukunqunyulwa kweenwele ezintsha kunye nokuzama iindlela zangoku kunye neendlela zokwenza iinwele zakho. Ukufumana ezinye izimvo ngeenwele kunye nokukhetha, jonga Eyona ndlela intsha yokwenza iinwele zamadoda kubafana ukuba bafumane .
ezinkulu ezintathu zokubala ngeenkwenkwezi
iinwele zamakhwenkwe aneenwele eziphothiweyo
iinwele zamadoda ubude obuphakathi
I-tattoos enemikhono epheleleyo yamadoda
I-50 yeeNwele eziLungileyo eziLungele amadoda